Fandaharan’asa FEC faha-5 43,4 tapitrisa dolara ny famatsiam-bola azon’i Madagasikara
Nankatoavin’ny Filankevi-pitantanan’ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI) ny 26 jolay 2019 ny famaranana faha-5 ny fandaharan’asa “Facilité Elargie de Crédit” na FEC.
Vola mitentina 157 108 000 000 Ariary no azon’i Madagasikara (1 dolara=3620 Ariary). Tsiahivina fa nanomboka tamin’ny 28 mey lasa teo ny fijerena ny tomban’ezaka andiany fahadimy nataon’i Madagasikara amin’ity fandaharan’asa FEC ity. Nahafa-po ary nizotra tamim-pilaminana ny vokatra azo saingy tsy maintsy manohy ny ezaka amin’ny fanamafisana ny fahamarinan-toeran’ny toekarena faobe, ny fampiroboroboana ny harinkarena faobe ny governemanta. Ilaina ihany koa ny ezaka amin’ny fampidiram-bolan’ny fanjakana sy ny mahakasika ny fanjakana tsara tantana ary ny ady amin’ny fahantrana sy kolikoly mba hampiakarana ny faripiainan’ny mponina. Hatreto dia mahatratra 302,8 tapitrisa dolara amerikanina ny fitambaran’ny vola azon’i Madagasikara tao anatin’ny fandaharan’asa FEC. Hampiakatra indray ny tahirim-bola vahinin’ny firenena izany ary hanatsara hatrany ny toekarena ankapobeny.